AmaXesha eeMephu zeMetro yeMetro yeeNdawo kunye neZikhululo | RayHaber
ikhayaTHE WORLDASIAI82 Korea (South)IiMetro zeMephu zeMetro yeeMetro kunye neZikhululo zeSeoul
26 / 11 / 2019 I82 Korea (South), ASIA, iimephu
Imephu ye-korea metro
Imephu yeSeoul yeMetro yokuSebenza ngexesha elifanelekileyo kunye neziqu: ISeoul lilikomkhulu loMzantsi Korea kunye nesona dolophu sithandwa kweli lizwe. Inxalenye enkulu yabemi bahlala eSeoul okanye kwindawo yokuhlala kufutshane neSeoul. Le yeyona nto inyusa unyawo lwabantu abahamba ngeenyawo kunye neemoto. Ngaphandle kwabemi abamalunga ne-25 yezigidi, siya kuzama ukunika ulwazi malunga nezi ndlela zangaphantsi zedolophu, ingxaki yazo yothutho isonjululwe nge-metro.
Imetro isungulwe ngokusesikweni ngo-Agasti 15 1974. Ubude bomgca 331,5 km'Dr. Nangona kunjalo, xa yonke imigca engaphakathi kwemida yesixeko ithathelwa ingqalelo, ubude bebonke bokwaloliwe buyeyona ndlela 1,097 kmukuya kuthi ga.
Imephu yeSeoul Metro
Kukho iindlela zokuhambisa metro ze-21 zizonke ngaphakathi kwemida yeSeoul. Imephu yale nkqubo, equlathe itram, uloliwe okhanyayo, indlela ephantsi komhlaba kunye namatyotyombe, imi ngolu hlobo lulandelayo:
Imephu ye-seoul yemetro
Inkqubo yasezantsi Korea ephuhliswe kakhulu yasebenza malunga nabakhweli beebhiliyoni ze-3 ngonyaka. I-Seoul Metro yenye yezona metro zixakekileyo ze-10 emhlabeni kwaye iboniswe njengomzekelo weendlela zangaphantsi.
Indawo yeWebhusayithi kaMetro esemthethweni: http://www.seoulmetro.co.kr/ (Korean, English, Japanese, Chinese)
Indawo yeSeoul Metro
I Hat Route Inani lezikhululo Ubude (km)
1. line i Soyos 114 200,6 km
2. line Iholo leSixeko -iSeongsu - iSindorim 51 60,2 km
4. line Dangoga ukuba 51 71,5 km
9. line Gaehw ukuba 42 26,9 km
AREX Isikhululo sikaloliwe saseSeoul 13 58,0 km
i Gyeongchun Sangbong 22 80,7 km
Shinbundang IGangnam 6 17,3 km
EverLink ukuba Giheung 15 18,1 km
Umgca Balgo 15 11,1 km
Isikhululo senqwelomoya i-Incheon kunye neZiko lesiXeko
Isixeko sikumgama we-47 km kwaye ezothutho esixekweni kulula kakhulu. Ungathenga itikiti elinye ukuya kwisitrato esingezantsi kunye nebhasi, kodwa zombini kukuchitha ixesha kwaye kubiza kakhulu. Ukuze ufumane ikhadi eliza kuba luncedo kakhulu kwezothutho ezidolophini, ungaya e-Incheon kwaye ugqibe yonke imisebenzi yokulawula, yehla kumgangatho omnye ukusuka kumgangatho wokuphuma kwaye ungene kwimarike oyibonileyo kuqala.T-maliIstem ndicela nje ikhadi.
Amaxabiso eTikiti seSeoul Subway
USETYENZISO METRO KUPHELA
I-10 km: 1,250KRW
I-10-50 km: i-5 KRW yongezwa nge-100 km nganye
+ I-50 km: i-8 KRW yongezwa nge-100 km nganye
[Ngaphakathi kweSeoul] 55,000 KRW (1,250KRW × 44th)
Ngaphandle kweSikhululo senqwelomoya, uMgaqo weSinbundang, umgca we-Everline kunye ne-U Line
Imozulu yeXesha elizayo
Izikhululo zeKayseri Tram zeShedyuli kunye…